Thu, Apr 25, 2019 | 11:33:33 NST
कोलेस्ट्रोल कम गर्ने खोप तयारः मुसामा सफल मानिसमा परीक्षण हुँदै
असार ८ – वैज्ञानिकले मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको कोलेस्ट्रोल कम गर्ने खोपको मानिसमा परीक्षण गरिरहेका छन् । मुसामा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि वैज्ञानिकले कोलेस्ट्रोल कम गर्ने खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु गरिएको हो ।
सस्तोमै आइफोन सेभेन प्लसको जस्तो फिचर भएको वन प्लस फाइभ बजारमा
वन प्लसले मंगलबार सन् २०१७ को लागि नयाँ फ्लेगशिप स्मार्टफोन वन प्लस फाइभ सार्वजनिक गरेको छ । यसभन्दा अगाडि आएको वन प्लस थ्रि टिकै अपग्रेडेड भर्सनको रुपमै वन प्लस फाइभ आएको कम्पनीले जनाएको छ । वन प्लस सन् २०१३मा स्थापना भएको चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी हो ।
​मुगु र हुम्लामा टेलिफोन र इन्टरनेट अवरुद्ध
जुम्लाको डाँफेलेकमा राखेको नेपाल टेलिकमको रिपिटर स्टेशनमा समस्या आउँदा मुगु र हुम्लामा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा गएको ६ दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
असर १ – फेसबुकमा नयाँ फिचर थप भएको छ । अब फेसबुकमा कमेन्ट गर्दा जिआइएफ पिक्चर पनि राख्न मिल्ने भएको छ । महिनौं लामो परीक्षणपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले जिआइएफ कमेन्टमा राख्न मिल्ने घोषणा गरेको हो ।
भक्तपुर, जेठ २६ – चोरी, डकैतीलगायत आपराधिक घटनालाई नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिले चोक÷चोकमा सिसी क्यामरा जडान गरेको छ ।
युएईमा पासपोर्टको सट्टा ‘स्मार्ट युएई वालेट’ प्रयोगमा
काठमाडौं, जेठ २६ – दुवईमा पासपोर्टको सट्टा ‘स्मार्ट युएई वालेट’ प्रयोगमा आएको छ । दुवईको इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुले अब पासपोर्टको सट्टा यो वालेट प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।
एनसेलले थ्रिजी प्रविधिमा आधारित मोवाइल इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने जनाएको छ । ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अवलम्बन गर्दै थ्रिजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवाको विस्तार दोब्बर गरी देशको ६० प्रतिशत जनसंख्यामा सेवा पुर्याउने एनसेलको दावी छ ।
रिपिटर स्टेशनमा महिनै पिच्छे चट्याङ पर्दा हुम्ला र मुगुका टेलिकम सेवाग्राहीलाई सास्ती
मुगु, जेठ १७ – नेपाल टेलिकमको जुम्लाको डाँफेमा रहेको मोबाइल रिपिटर स्टेशनमा महिनै पिच्छे चट्याङ परेर सेवा अवरुद्ध हुँदा कर्णालीको मुगु र हुम्लाका सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
कटारी नगरपालिकामा एटिएम सेवा नहुँदा सेवाग्राही मारमा
उदयपुर, जेठ १४ – उदयपुरको पश्चिमी क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कटारी नगरपालिकाका सरकारी तथा निजी बैंकमा अहिलेसम्म पनि बैंकले एटिएम सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
एनसेलले ल्यायो ‘योण्डर म्युजिक एप’, यस्तो छ विशेषता
काठमाडौ, जेठ १२ – एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि ‘योण्डर म्युजिक एप’ ल्याएको छ । योण्डर म्युजिक एक डिजिटल संगीत प्रदायक सेवा हो जसमार्फत यसका प्रयोगकर्ताले गीतहरु बजाउन, डाउनलोड गर्न तथा सेयर गर्न सक्छन् ।
वैशाख ३० – ठूलो स्तरको साइबर आक्रमणका कारण विश्वका धेरै ठाउँका संघसंस्था प्रभावित भएका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीले तयार पारेको अनुमान गरिएको रानसमवेयरको प्रयोग गरेर विश्वका धेरै ठाउँका संघसंस्थाका कम्प्युटरमा साइबर आक्रमण भएको हो ।
स्थानीय चुनावको ताजा जानकारीका लागि हाम्रो पात्रोको ‘चुनाव विशेष नयाँ अपडेट’
काठमाडौं, वैशाख २९ – हाम्रो पात्रोले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर स्थानीय चुनाव विशेष नयाँ अपडेट गर्ने भएको छ ।
एचआइभीको उपचारमा ठूलो सफलता, संक्रमितको जीवनकाल सामान्य बन्दै
वैशाख २८ – एचआइभी भाइरस विरुद्धको औषधि प्रयोग गरिरहेका युवाको जीवन प्रत्यासा अर्थात जीवनकाल सामान्य जस्तै बन्दै गएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
तपाईंले चलाउँदै आएको मोबाइल सुरक्षित घरका लागि पनि काम लाग्ने भएको छ । भूकम्प थेग्ने बलियो घर बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरक्षित घर मोवाइल एप्लिकेशन ल्याएको छ ।
दार्चुलामा तीन दिनदेखि फोन सेवा अवरुद्ध
बैतडी, वैशाख २४ – दार्चुलाको मार्मा क्षेत्रमा तीन दिनदेखि फोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार हावाहुरीसँगै परेको चट्याङले सिप्टीमा रहेको स्काइ फोनको टावरमा रहेका उपकरणमा क्षति पुर्‍याएपछि फोन सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
एनसेललाई ‘टेलिकम एसिया अवार्डस्’
काठमाडौंं, वैशाख २२ – एनसेल एशिया प्यासिफिक क्षेत्रकै प्रतिष्ठित अवार्ड मानिने ‘टेलिकम एसिया अवार्डस् २०१७’ बाट सम्मानित भएको छ ।
फेसबुकले तीन हजार कर्मचारी थप्ने
वैशाख २१ – फेसबुक पेजमा पोस्ट हुने सामग्रीको समीक्षाका लागि फेसबुकले तीन हजार कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ । घृणालाई बढावा दिने भाषण, बालबालिकाको शोषण तथा दुरुपयोग सम्बन्धी सामग्री र भिडियो लाइभ गरेर हत्या तथा आत्महत्या गर्ने जस्ता सामग्रीको समीक्षा तथा त्यसलाई निरुत्साहित गर्नेका लागि फेसबुकले तीन हजार कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको हो ।
साउदीमा दुई वटा मात्रै सिमकार्ड प्रयोग गर्न पाइने
काठमाडौं, वैशाख १६– साउदीमा अबदेखि आप्रवासी कामदारले दुई वटा मात्र सिमकार्ड प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । धेरै वटा सिमकार्ड प्रयोग गर्दा आपराधिक क्रियाकलाप बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि साउदी सरकारले नयाँ नियम ल्याएको हो ।
स्मार्टफोन मधुमेहको उपचारमा उपयोगी
वैशाख १६ – स्मार्टफोन मधुमेहको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिने वैज्ञानिकले बताएका छन् । वैज्ञानिकले जनावरको जीवित कोषका गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्मार्टफोनको प्रयोग गरेका छन् ।
एनसेलले भन्यो – वितरक सम्झौता खारेज भएको छैन
काठमाडौं, वैशाख १३ – एनसेलसँग मिलेर काम गरेका केही डिलर तथा वितरक कम्पनीले एनसेलका बारेमा झुटा तथा आधारहिन आरोप लगाएको भन्दै एनसेलले त्यसको खण्डन गरेको छ ।
तेह्रथुम, वैशाख १३ – बुधबार बिहानैदेखि पूर्वका विभिन्न जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भएको छ । नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, प्रिपेड तथा पोस्टपेड र सिडिएमएका साथै एडिएसएल सेवा अवरुद्ध हुँदा लाखौं सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् ।
काठमाडौं, वैशाख १२ – नेपाल टेलिकमले यही वैशाख १ गतेदेखि नेपाल सरकारबाट सञ्चालित ‘.gov.np.’ डोमिनका झण्डै पाँच सय ५० वेबसाइट टेलिकमका जिएसएम मोबाइल सेवाबाट निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
वैशाख १२ – प्लाष्टिकको झोला खाने क्याटरपिलर अर्थात पुतली तथा भुसुनाको लार्भा (किरा) प्लाष्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहयोगी बन्ने वैज्ञानिकले बताएका छन् ।
आविष्कार केन्द्रले रिसर्च ल्याब खोल्ने
काठमाडौं, वैशाख १० – राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र अर्थात रिसर्च ल्याब खोल्ने भएको छ । तत्कालका लागि सानै भएपनि रिसर्च ल्याब खोल्ने निर्णय गरेर घर खोज्ने काम भइरहेको केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले जानकारी दिनुभयो ।
एनसेलले नयाँ डेटा प्याकहरु ल्याएको छ । एनसेलले डेटा सेवा न्युनतम ६ पैसामा, विभिन्न समयावधिका डेटा प्याकहरु बढी डेटा भोलुमका साथ, दुई गुणा भोल्युमको डे प्याक तथा चार गुणा भोल्युमको नाइट प्याकसहितका सुविधा ल्याएको हो ।
काडमाडौं, वैशाख ६ – मर्करीयुक्त उपकरणहरुको बढ्दो प्रयोगले गर्भवतीहरु जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । मूर्तिकला व्यवसाय गर्ने, सुनमा जलप लगाउने, माझी समुदायका महिलाले मर्करीयुक्त उपकरणको प्रयोग बढी गर्ने भएकाले उनीहरु जोखिममा रहेका अध्ययनको ठहर छ ।
सामसुङले ल्यायो नयाँ फोन, नेपाली बजारमा एस ८ र एस ८ प्लस
काठमाडौं, वैशाख ६ – सामसुङले नेपाली बजारमा एस ८ र एस ८ प्लस स्मार्टफोन ल्याएको छ । वैशाख २२ गतेबाट नेपाली बजारमा किन्न सकिने यी फोन बुधबारदेखि बुकिङ गर्न सकिने सामसुङले जनाएको छ ।
अमेरिकाले विश्वव्यापी रुपमा बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरेको आरोप
वैशाख २ – अमेरिकी सरकारले विश्वव्यापी रुपमा स्वीफ्ट बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरेको आरोप लागेको छ । ह्याकिङ समूह स्याडो ब्रोक्रसले जारी गरेको कागजातमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) ले विश्वव्यापी रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा निगरानी गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
एनसेलका ग्राहकले अब करसहित मात्र एक रुपैयाँमा पिआरबिटी सेवा पाउने भएका छन् ।
अप्टिकल फाइबरमा समस्या आउँदा इन्टरनेट र फोन बन्द
बर्दिया, चैत २९ – नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाइवरमा समस्या आएपछि मध्यपश्चिमका बाँके र बर्दियासहित सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा सञ्चारसेवा अवरुद्ध भएको छ।
सबै भन्दा ठूलो ग्रह बृहस्पति आज पृथ्वीको नजिक आउने
काठमाडौं, चैत २५ – सौर्यमण्डलको सबै भन्दा ठूलो ग्रह बृहस्पति शुक्रबार पृथ्वीको नजिक आउने खगोलविद्ले बताएका छन् । शुक्रबार सूर्यास्त पछि बृहस्पति उदाइहाल्ने र रातभरी चम्कने खगोलविद सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो । शुक्रबार सूर्यास्त भएपछि उदाउने बृहस्पति सूर्योदय नहुन्जेलसम्म देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं, चैत २५ – नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकन कम्पनी एएआरसँग दुईवटा वाइड बडी जहाज किन्ने सम्झौता गरेको छ । निगम र एएआरबिच शुक्रबार पहिलो जहाज सन् २०१८ को अप्रिलसम्म र दोस्रो १८ कै मे महिनासम्ममा ल्याउने गरी सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार र एएआरका नेपाल प्रतिनिधि दीपक शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो । दुबै
सरकारले वैशाख १५ गतेपछि सबै केवल टिभी डिजिटल स्वरुपमा मात्र चल्न पाउने बताएको छ । प्रविधि पत्रकार मञ्चले गरेको कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले वैशाख १६ गतेदेखि कुनै पनि हालतमा एनालग केवल टीभी सञ्चालन हुन नदिने बताउनुभएको हो ।
व्यायाम गर्नुहुन्न भने सावधान !
चैत २१ – विश्वमा हरेक वर्ष ५० लाख मानिसको शारीरिक अभ्यास नगर्दा ज्यान जाने गरेको पाइएको छ । बेलायतको हार्ट फाउण्डेशनले जारी गरेको प्रतिवेदनमा शारीरिक व्यायाम नगर्दा हृदयघातको खतरा उच्च हुने उल्लेख गरेको छ ।
आविष्कार केन्द्रका लागि के गर्दैछन महावीर ?
क्रिम दलेर उजिल्लाइएको अनुहारमा झोला बोकेका महावीर केही सिक्दै जस्तो देखिनुहुन्छ । अनि अर्को तस्बिरमा चाहिं मेकअप आर्टिष्टले अनुहारमा क्रिम ‘लिपपोत’ गरिरहनुभएको छ । जीवनमा मोजमस्ती नक्कलझक्कल अर्थात रंगीन कुरामा खासै ध्यान नदिने महावीर पुनले यसपटक चार दिन अनुहारमा क्रिमपाउडर घस्नुपर्यो ।